News 18 Nepal || मकाउमा १२ जना नेपाली किन समातिए ?
मकाउमा १२ जना नेपाली किन समातिए ?
काठमाडौं । मकाउमा पोर्न भिडियो सेयर गरेको आरोपमा १२ जना नेपाली समातिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोर्न भिडियो सेयर गरेको आरोपमा १२ जना नेपाली सेक्युरिटी गार्डलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मकाउ प्रहरीका प्रवक्ता चोङ काम फाइले १२ मध्ये १० जनाले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको बताएका छन् । समातिएका नेपालीहरु २३ देखि ४७ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
मकाउ प्रहरीले ११ अगस्तमा इन्टरपोलबाट सूचना पाएर अप्रिलदेखि मेमा मकाउमा फेसबुकमा बच्चाको अश्लील भिडियो सेयर गरेको आंशका गरेको थियो । दुई मिनेट २९ सेकेन्डको उक्त भिडियो नेपाली युवाहरुले फेसबुकमा सेयर गरेका थिए । उक्त भिडियोमा एक १२ वर्षीया बालिकाले एक विदेशी पुरुषसँग मुख मैथुन गर्दै शारिरीक सम्पर्क राखेको देख्न सकिन्छ ।
प्रहरीले पोर्न भिडियो सेयर गर्न प्रयोग भएका १२ वटा स्मार्टफोन जफत गरेको छ । १० जनाले फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत उक्त भिडियो प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनीहरुले त्यसपछि उक्त भिडियो आफ्ना साथीहरूलाई पठाइएका थिए । तर, अन्य दुई जनाले भने अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि इन्टरपोलले जारी गरेको सूचना अनुसार उनीहरू पनि त्यस घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ ।
प्रहरी प्रवक्ताले अन्य सम्भावित बाल अश्लील भिडियोहरू मकाउमा प्रशारित भइरहेको र भिडियो खिच्ने व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । आफ्ना कर्मचारी समातिएपछि त्यहाँको कम्पनीले नाबालिगको भिडियो सेयर गर्ने कार्यमा नेपाली सुरक्षा गार्ड नै संलग्न हुनु दुःखद् भएको बताएको छ ।
पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिएपछि त्यहाँको प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । कानून उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि स्टाफ सदस्यलाई कारबाही गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रहरीले पोर्न भिडियो सेयर गरेको आरोपमा नेपाली पक्राउ परेको यो घटना दोस्रोपटक भएको बताएको छ ।
यस अघि अगष्ट २४ मा ११ जना नेपालीलाई फेसबुकमा दुई मिनेट २९ सेकेन्ड लामो भिडियो सेयर गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । ११ मध्ये ७ जनाले अपराध स्वीकार गरेका थिए । यी दुवै घटनामा सेयर भएका भिडियो भने एउटै भएको प्रहरीले बताएको छ । पहिले पनि सोही १२ वर्षीया बालिकाको पोर्न भिडियो सेयर भएको थियो ।
कार्तिक १० गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल